Linux Distribution and Package Manager Guix 1.2 Navoaka | Avy amin'ny Linux
Efa natomboka ny GNU Guix 1.2 manager manager ary ny kitapom-bolan'ny GNU / Linux natsangana teo ambonin'ity fotony ity.
Kit ny fizarana azo apetraka ho rafitra miasa irery amin'ny rafitra virtoaly, ao anaty kaontenera sy amin'ny fitaovana mahazatra, ary afaka mihazakazaka amin'ny fizarana GNU / Linux efa napetraka, miasa ho toy ny sehatra hampiharana fampiharana.
Manana ny asany ny mpampiasa toy ny kaonty miankina amin'ny fiankinan-doha, miasa tsy misy faka, miverina amin'ny kinova taloha raha sendra olana, fitantanana fikirakirana, cloning tontolo iainana (mamorona kopian'ny tontolon'ny rindrambaiko amin'ny solosaina hafa), sns.
Tsara ny manonona izany mifototra amin'ny ny manager GNU Guix fonosana ny fiasan'ny tetikasa Nix ary, ho fanampin'ny fiasa mahazatra fonosana fitantanana, manohana endri-javatra toy ny fanatanterahana fanavaozana transactional, ny fahaiza-mamerina ny fanavaozana, miasa nefa tsy mahazo tombony ho an'ny superuser, fanohanana ireo mombamomba mifandraika amin'ireo mpampiasa tsirairay, ny fahaizana mametraka andiany marobe amin'ny programa iray, ireo mpanangona fako (famantarana sy fanesorana ireo kinova fonosana tsy ampiasaina).
Mba hamaritana ny script fananganana fampiharana sy ny fonosana fitsipika, aroso hampiasa fiteny avo lenta voafaritra manokana Ny singa API Guile Scheme API, ahafahanao manao ny asa fitantanana fonosana rehetra amin'ny Skema fitenenana fandefasana programa.
1 Ny zava-baovao ao amin'ny Guix 1.2
2 Ampidino ny Guix 1.2
Ny zava-baovao ao amin'ny Guix 1.2
Ao amin'ity kinova vaovao ity ho an'ny mpitantana fonosana ny fahafahany manamarina ireo tahiry fonosana dia nampiharina "Guix pull" ary ny baiko mitovy amin'izany ankehitriny dia manamarina ny kaody kriptografika izay nesorina tao amin'ny toeram-pivarotana, manakana ny komitin'ny olona tsy nahazoana alalana hisintona azy avy ao amin'ny toerana anaovana azy.
ihany koas nanampy baiko "Guix git marina", izay pmamela ny fampiasana ny mekanisma fanamarinana natolotra ho an'ny repositories git arbitrary.
Ny baiko "Guix pull" sy "guix system reconfigure" dia ampiharina mba hahitana sy hanakanana ny famerenan'ny rafitra amin'ny kinova taloha mba hisorohana ny programa tsy haverina amin'ny endriny marefo mba hitrandrahana ireo fahalemena napetraka ao amin'ireo kinova ankehitriny.
Nanampy serivisy fanavaozana mandeha ho azy izay manao "guix pull" sy "guix system reconfigure" indraindray mba hitazomana ny rafitra havaozina, ary koa fanohanana ny hashes crypto SHA-3 sy BLAKE2 amin'ny dingan'ny fanangonana sy ny API.
Nihatsara ny fampiasana installer graphic ary ny script hametrahana Guix amin'ny tontolon'ny fizarana hafa.
Azontsika atao ihany koa ny mahita ny maodely paging vaovao amin'ny fikarohana guix, ny fikarohana ny rafitra guix ary ny baiko mitovy amin'izany.
Ankoatr'izay ny asa dia natao tamin'ny fampihenana ny fotoana fanangonana ary ny fanjifana loharanon-karena rehefa manatanteraka ny baiko «guix pull» manararaotra ilay mpanangona vaovao nampidirina tao amin'ny Guile 3.0.4 ary izany nanampy serivisy hurd-vm miaraka amin'ny rafitra Guix GNU / Hurd cross compiler izay mandeha ho milina virtoaly ao amin'ny GNU / Linux.
Niampy safidy fanovana fonosana telo vaovao "–With-debug-info", "–with-c-toolchain" ary "–without-test".
Ilay baiko "Guix pack -RR" dia manampy fanampiana ny motera "fakechroot" hamoronana fonosana azo afindra izay azo atao amin'ny tontolo iainana tsy misy Guix.
Nanampy ny modely "gnu image" sy ny baiko "guix disk-image –image-type = TYPE" hiasa amin'ny sarin'ny rafitra amin'ny ISO-9660, qcow2 misy partition ext4, ext2 miaraka amin'ny safidin'i Hurd, sns.
Voalaza koa fa nanampy serivisy rafitra vaovao lxqt, udev-rules, hostapd, zram, autossh, webssh, ganeti, gmnisrv, guix-build-coordinator, guix-build-coordinator-agents, guix-build-coordinator-queue-builds, hurd-console, hurd-getty, hurd-vm, rshiny.
Ary koa ireo kinova fanavaozana ireo programa amin'ny Fonosana 3652, fonosana vaovao 1999 nampiana. Anisan'izany ireo kinova nohavaozina GNOME 3.34.2, MATE 1.24.1, fahazavana 0.24.2, xfce 4.14.2, xorg-server 1.20.8, bash 5.0.16, gcc 10.2.0, gimp 2.10.22, glibc 2.31, mankanesa any 1.14.10 , inkscape 1.0.1, libreoffice 6.4.6.2, linux-libre 5.9.3, openjdk 14.0, python 3.8.2, harafesina 1.46.0.
Fiovana iray hafa voalaza:
Ny setra mimari-droa farany ambany ho an'ny maritrano x86_64 sy i686 dia nahena ho 60MB.
Nanampy fanampiana ho an'ny FS NTFS ao amin'ny installer graphique.
Natomboka ny asa amin'ny fampiharana ny fanampiana GNU / Hurd tompon-tany.
Ampidino ny Guix 1.2
Farany ho an'ireo izay liana amin'ny fitsapana ny manager manager na ny fizarana, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany fametrahana sy / na mahita ireo sary alaina, Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Sary apetraka amin'ny USB Flash (489 MB) sy ny fampiasana azy amin'ny rafitra virtualization (479 MB). Asa tohana amin'ny maritrano i686, x86_64, armv7 ary aarch64.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ny Linux fizarana sy ny fonosana Guix 1.2 dia efa navotsotra
Scratux: Ahoana no ahazoana ny kinova farany an'ny Scratch ao amin'ny GNU / Linux?